Samsung ga-elekwasị anya na ngalaba teknụzụ ọhụụ atọ | Gam akporosis
N'oge ụnyaahụ, onye na-emepụta Korea bụ Samsung, mere nhọrọ nke oru ohuru maka oru ndi oru nke ulo oru. Samsung ga-elekwasị anya na mpaghara atọ dị na afọ ndị na-abịanụ: ịwụnye batrị ngwa ngwa, ihe mpụga na-arụ ọrụ, yana ọgụgụ isi maka ngwaọrụ ndị nwere ọgụgụ isi.
Ọrụ ndị a na-abịa mmemme ego nke Samsung n'afọ a, si otú a na-agbaso ọdịnala nke onye nrụpụta eburu kemgbe mmemme a malitere na 2013 maka mmepe nke sayensị sayensị, sayensị ihe ọmụma na teknụzụ nkwukọrịta, akụkụ nke ịrụ ọrụ na teknụzụ ọhụụ na nke ọdịnihu.
Ọ bụrụ na onye nrụpụta a ma ama nwere ihe, ọ bụ eziokwu na ọ nwere ngwaahịa na mpaghara ọ bụla nke teknụzụ. O doro anya na Samsung bụ otu n'ime ndị nrụpụta teknụzụ kachasị ukwuu na mbara ala ụwa ma na-aga n'ihu na-achọ ịdị na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ n'ọdịnihu yana na-achọkwa ịkwalite ngwaahịa ya kwa ụbọchị site na iji ọrụ ọhụụ.
Atọ ọhụrụ ọhụrụ maka Samsung
Amamịghe echiche na-eji nwayọọ nwayọọ aghọwanye ihe dị mkpa na ụwa nke teknụzụ, ma ọ bụ n'ihi na n'ime afọ ndị ga-eme ka ịgwa onye na-enyere aka aka dịka Siri, Google Ugbu a, wdg. a na-enye ngwa nke ọdịnihu. N'agbanyeghị nke ahụ, Samsung ga-akwado ọrụ isii iji zụlite ọgụgụ isi dị otú ahụ maka ngwaọrụ ha. N'ime oru ndị a, ha gụnyere mmepe nke ngwaike ngwaike maka ọgụgụ isi na ịntanetị nke ihe, yabụ, n'ụzọ dị otu a, ọ ga-enye ohere ka ngwaọrụ ndị nwere ọgụgụ isi rụọ ọrụ na-enweghị mkpa bulite ihe site na igwe ojii ma ọ bụ sava mpụga.
N'okwu nke batrị na-ebu ngwa ngwa ọ na-elekwasị anya na ọrụ ọhụụ atọ, otu n'ime ha na-emekọ ụgwọ ngwa ngwa na-enweghị ọnwụ nke ike. Ya mere, dị ka isi mmalite kacha nso ụlọ ọrụ ahụ, ọ nwere ike ịbụ na batrị mepụtara na teknụzụ ọhụụ nwere 80% ikike mgbe odori ngwaọrụ 10 min. N'aka nke ọzọ, Samsung ga-akwụkwa ego ọrụ na ọtụtụ ọrụ maka ihe mpụga na-arụ ọrụ, gụnyere ọrụ nke a metal mgbanwe enwe ike ijigide ụdị anụ ahụ nke ọla.
Obi abụọ adịghị ya na a ga-egosipụta ọrụ ndị a na na-abịa Samsung ngwaọrụ, ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya ịhụ ọgbọ Samsung ọzọ n'okpuru atụmatụ ọhụrụ ndị a, a ọhụrụ AI, ngwa ngwa batrịenwere ụfọdụ ihe na-eguzogide ọgwụ ma na-agbanwe agbanwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung ga-elekwasị anya na ngalaba teknụzụ ọhụụ atọ